°Qaroo Qeerroo° Tokkummaan keenya kan garbummaa qancarsu utuu hintaane, kan hidda garboonfataa cicciru ta’uu qaba « QEERROO
°Qaroo Qeerroo° Tokkummaan keenya kan garbummaa qancarsu utuu hintaane, kan hidda garboonfataa cicciru ta’uu qaba
December 5, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Qalbeessaa Dhangi’aa tiin
Oromiyaa keessatti baalaaf raaba, qabsaa’aaf diinatu “Tokkummaa,Tokkummaa” jechaa oola. Keessattuu kanneen halagaa jala gugatanii waggoota dheeraaf uummata gurguratanii nyaachaa turan jecha kanaan utuu haloolamaa oolanii argina. Waltajjii marii kam irratti utuu hinkaafamin haftee hinbeektu jechi Tokkummaa.
Tokkummaan uummata keenya akka waan bara aangoosaaniitti dhufeetti yeroo iyyaa oolanis nii agarra. Jaallatanis jibbanis Oromoon achii as dhuftee tokkummaa jabaa qaba. Gaafa qabsaa’oonni yaada ijaarsaa kaasan “Tokkummaa uummataatu boora’a, kana hinjedhinaa nii diigamaa uummanni, alaabaa hinqabatinaa Tokkummaa keenyatu diigamaa” utuu jedhaniis argaa jirra.
Tokkummaan kun jecha sakaallaa siyyaasaa akka hinaanetti qaroon Qeerroo argu wal hubachiisuun dirqama taati. Har’a maqaa Tokkumaatiin
uummata keenya gidirsuun dhaabbachuu qaba. Jecha kana dura qabuun qabsoorraa uummata dachaasuun hindandaa’amu.
Alaabaa ABO faajjii uummataa olakaasanii qabachuun tokkummaa uummataa jabeessa malee tokkummaa uummataa diiga miti. Tokkummaa sana kan bakkatti eege, qabsaa’ota faajjii sana jalatti wareegamaa turan ta’uu marruu beekna. Waan ta’eef dubbii diinni ittiin kaayyoosaa galmaan
gahachuuf tokkummaa diiggataa lafa ka’i jedhuun gowwonfamuun hinbarnaachisu.
Tokkummaa uummataa dhiiga xuuxxuu OPDO tu qabee yoonan gahe muti. Qabsoo haqaaf qabsaa’ota muratoo kaleessa darbaniif har’as qabsootti
jirantu ijaaree jajjabeessaa yoonaan gahe. Kellaan Tokkummaa yeroo yerootti irbuu qabsaa’otaatiin jajjabeeffamaa bula. Kellaa odeessituun
afuuraan jigsituuf, kellaa halagaan dhiibee jigsuu danda’u miti.
Kanaaf Tokkummaan uummata keenyaa kaleessaa kan bifa haaraan danfee mul’ataa jiru kun qabsaa’ota dirree qabsootii itti beelaa’aa jiraniin
tikfamtee yoona geesse. Qeerroo Bilisummaa Oromoo tiinis jajjabeeffamtee jiraatti.
Gama biraan afuuffeen wayyaanee afuura TPLF’n iyyitee sagaleen hirtibaaf nagaa nama dhowwatan jechoota qabsaa’otaa fayyadamuun
uummata dogongorsuuf aggaammiin taasifamaa jiru salphaa miti. “Qabsoo itti jirru galiin ga’uuf….” Kanaan yeroo hololaa oolan argina.
Qabsoon isaan itti jiran duuchaadhumatti uummata Oromoo lafarraa kaasuu, godaansisuudha. Oromoo guutummaatti lafarraa fixanii
gooftoliisaanii gammachiisuun qabsoo isaan itti jiranidha. Kan isaan afaaniin dhaadatanis kana akka ta’e hubachuu nu gaafata. Malee qabsoo
Bilisummaa uummataa akka hintaane hubachuun barbaachisaadha.
“Gabaan nama miti fira dhaba waccati” jedha Oromoon. Oromoonis qaama hidda mormaa kaasee waan isa gammachisu dhabe miti. Qaama isa waliin qabsaa’ee kaayyoo isaa kaayyoo ABO galmaan ga’u, qaama WBO jajjabeessee diina lolee lolchiisu barbaacha diramataa dhabee gadoodaa
oola. Kanaaf ammas Tokkummaan keenya kan wayyaanee qancarsu utuu hintaane kan hidda garboonfataa kukkutu ta’uu qaba
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati
« Mudde 4,2017, Qeerroon University Mattuu “Gaaffiin Ummata Oromoo Deebi’uu” Qaba Jechuun Barnoota Addaan Kutan.
Guyyaa Har’aa Gootonni Baratooti University Wallaggaa Gaaffii Mirgaa Deebii Hamma Argatu Qabsoo Itti Fufna Jedhuun Mooraa Gadhiisanii Deemaa Jiru. »
SBO MUDDE 09,2018. Oduu fi Gaaffii fi deebii Itti Aanaa Hayyu-Duree ABO Jaal Araarsoo Biqilaa kutaa 5ffaa fi isa xumuraa
SBO MUDDE 09,2018. Oduu fi Gaaffii fi deebii I.A. H.D ABO Jaal Araarsoo Biqilaa waliin kutaa 5ffaa fi isa xumuraa
SBO: Muddee 7, 2018. Oduu, Gabaasa Saamicha Godina Addaa Naannawa Finfinnee Ona Walmaraatti Gaggeeffamu ilaallatuu fi Hiriira Mormii Magaalaa Adaamaatti Adeemsifame.
SBO MUDDE 05,2018. Oduu, Haala yeroo irratti ibsa ABO fi Gimbii, Haroo Sabbuu fi naannoo Gaara Mul’ataatti hiriirota geggeeffaman irratti marii hirmaattota waliin taasisame
Gochaan ajjeechaa fi lafa irraa buqqaatinsaa akkasuma gochaan saamichaa Oromoo irraa dhaabbachuu qaba!
The Big DayDecember 11th, 2018
Walaloo Qeelloo Daakaa Irraa
Adaa Oromoo Boonsaa, Aadaa Fuudhaa fi Heeruma Arfan Qalloo /Sabboonaa Abrahim Abdurhamaan Qeerroo Harargee